Sheekada Filimka Telugu ah Vunnadhi Okate Zindagi: Ram Pothineni wuu ka baxsaday filimkaan | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada Filimka Telugu ah Vunnadhi Okate Zindagi: Ram Pothineni wuu ka baxsaday filimkaan
Waxaa maanta tiyaatarada la saaray filimka Telugu ah Vunnadhi Okate Zindagi (VOZ) waxaana hogaamiye ka ah jilaaga hormarka wacan sameenayo Ram Pothineni.
Jilaayaasha filimka VOZ: Ram Pothineni, Sree Vishnu, Lavanya Tripathi iyo Anupama Parameswaran
Fariinta Filimka VOZ Oo Kooban: Abhi (Ram) iyo Vasu (Sree Vishnu) waa saaxiibo aad isugu dhow tan iyo caruurnimadoodii.
Laakiin xiliga waxrabashada Colleg-ka marka lasoo gaaro Abhi (Ram) iyo Vasu (Sree Vishnu) noloshooda waxaa soo dhex galeyso Maha (Anupama) taasi oo jaceyl u qaadeyso Abhi.
Kadib is fahan daro xoogan ayaa soo kala dhax galeyso Abhi (Ram) iyo Vasu (Sree Vishnu) weyna kala tagayaan dib iskuma arkayaan.
Mudo afar sano kadib Abhi (Ram) iyo Vasu (Sree Vishnu) iyo saaxiibadooda waxay ku kulmayaan aroos ka dhacaayo magaalada Ooty.
Abhi (Ram) iyo Vasu (Sree Vishnu) waxaa loo xil saaraa diyaarinta xaflada aroos ayagoo garab siinayaan gabadha naqshadeeneyso arooska Maggy (Lavanya).
Hadaba filimkaan waxaa xiiso u yeelayo in la ogaado maxaa ku dhacay Maha (Anupama) oo afra sano ka hor Abhi (Ram) iyo Vasu (Sree Vishnu) kala geesay micnaha labadii wiil saaxiibada ahaa gabadhii kala geesay?
Sidoo kale Abhi (Ram) iyo Vasu (Sree Vishnu) sidee xal ugu heli karaan farqiga nololeed ee u dhaxeeyo iyo arinkii afar sano ka hor ku kala tageen?
Bandhiga Jilayaasha Filimka VOZ: Ram Pothineni shaqo cajiib badan ayuu qabtay weliba wuxuu muujiyay xidigaan inuu jaceylka ku wacan yahay waana hubaal in filimkaan maqaam sare ku gaari doonaa qaab jiliin ahaan inuu yahay atoore fariin walbo jili karo.
Sidoo kale doorka saaxiibtinimada iyo tanaasulka nolosha si wacan ayuu u jilay Ram waxaana la dhihi karaa VOZ bandhigiisa ugu wacnaa uu kusoo bandhigay dhanka shaashadaha
Sri Vishnu isagana si wacan ayuu doorkiisa u matalay si gaar ah dhamaadka filimkaan saameyn xoogan ayuu ku leeyahay weliba si wacan ayuu filimka nuxur ugu yeelay qaybihiisa dambe.
Anupama doorkeeda waa mid wanaagsan sidoo kalena boos fiican oo ku filan ayaa atirishadaan la siiyay laakiin Lavanya doorkeeda waa mid liito saameyn xoogana kuma lahan filimkaan sidoo kalena jilaayaasha kale ee filimkaan ku jiraan waa kuwo doorarkooda wanaagsan yahay.
Maxaa Laga Yiri Sheekada Filimka Vunnadhi Okate Zindagi: Waa filim qiiro badan diiradana lagu saaray saaxiibtinimada sidoo kalena jaceylka si wacan loogu dhex lifaaqay sidoo kalena filimkaan shactiro kugu filan ayaad ka heleysaa.
Director Kishore Tirumala markale wuxuu muujiyay inuu filim sameeye geesi ah yahay wuxuuna doortay fariin aan reer Telugu inta badan looga baranin madaama VOZ uu yahay filim dagan jaceyl iyo saaxiibtinada ka hadlaayo si wacan ayuu u sameeyay fariinta uu doortay.
Filimka VOZ waxa uu ku liito ayaa ah in xoogaa qaybaha hore caajis ka muuqdaan sidoo kalena atirishada labaad in doorkeeda mid adag laga dhigo ayaa wacneyd.
Gunaanad: VOZ waa filim dhalinta loogu tala galay ka hadlaayo saaxiibtinada, tanaasulka jaceylka sidoo kalena leh shactiro sidaa darteed Boxoffice-ka wuxuu ka sameyn doonaa ganacsi guul ku dheehan madaama sheekadiisa aad loo wada amaanayo waxaana la siiyay qiimeyn ahaan 3.25/5 taasi oo ka dhigan in fariintiisa ay wacan tahay.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska VOZ:
Waxaa Aqrisay 997